အူဘာမီယန် နဲ့ အာတီတာကြားမှာ အာဆင်ဝင်းဂါး ဘယ်သူ့ဘက်က ပါ? – Gunners' Side
အူဘာမီယန် နဲ့ အာတီတာကြားမှာ အာဆင်ဝင်းဂါး ဘယ်သူ့ဘက်က ပါ?
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ် ဦးဆောင်နေခဲ့တဲ့ အူဘာမီးယန်းနဲ့ အသင်းမန်နေဂျာ အာတီတာတို့ အဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် အသင်းလည်း အနည်းနဲ့အများ လှုပ်ခတ်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ခြေစွမ်းပိုင်းနဲ့ စည်းကမ်းပိုင်းမှာ ယုတ်လျော့လာတဲ့ အူဘာကို အာတီတာက ဒီဇင်ဘာလ အလယ်မှာ အသင်းခေါင်းဆောင်လက်ပတ် ပြန်သိမ်းခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာတော့ ပြောင်းရွှေ့ကြေးမယူဘဲနဲ့တောင် လူလျှော့တဲ့ သဘောနဲ့ အပြီးသတ် ရောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကတည်းက အားလပ်ရက်တွေအပြီးမှာ အသင်းနဲ့ပြန်လာပူးပေါင်းတာ နောက်ကျလို့ တစ်ယောက်တည်း လေ့ကျင့်ခန်း ဆင်းရတာတွေ၊ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို မကြာခဏ နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတာတွေနဲ့မို့ အူဘာမီယန်းကို အာတေတာက စည်းကမ်းပိုင်းမှာ စိတ်ပျက်နေခဲ့ရတာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ အပျက်ပျက်နဲ့ပဲ ခွါပြဲခဲ့ ကြရပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကို အာဆင်ဝင်းဂါးသာဆိုရင် ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကို ဘောလုံးပရိတ်သတ်တွေက စိတ်ဝင်စားနေကြမှာပါ။ ဒါကိုသိနေတဲ့ အာဆင်းကလည်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဒီလို ပြောပြအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
” ကစားသမားတွေကို ပါဝါတွေ အာဏာတွေ သွားပေးလိုက်လို့ မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို နည်းနည်းတော့ အထူးတလည် သဘောထားပြီး ဆက်ဆံပေးရမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး ခြေစွမ်းတွေပြပြီး အနေအထားတစ်ခုကို ရောက်လာတဲ့ ကစားသမားတွေဟာ အသင်းမှာ ပါဝါ လိုချင်လာတတ်ကြပြီး မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ ဒါကို လိုက်ပြီးထိမ်းရပါတော့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ မန်နေဂျာသက်တမ်းမှာ ဒါမျိုးတွေ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ ကစားသမားတွေကို ခေါက်ထားခဲ့ရပြီး ကိုယ့်အလုပ်ကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်ခဲ့ရတာမျိုးပေါ့ဗျာ” ဆိုပြီး ပြောပြခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့်မို့ အာဆင်ဗန်းဂါးကတော့ အာတီတာနဲ့ အူဘာမီးယန်းဖြစ်ရပ်မှာ အကျိုးရှိအောင် အကြံဥာဏ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် အာတီတာဘက်ကနေလည်း မသိမသာ ထောက်ခံသွားတယ်လို့ ယူဆရမှာပါ။ အာဆင်ဝင်းဂါးကိုယ်တိုင်လည်း နည်းပြဘဝမှာ သူ့ရဲ့လက်ထွက် ထိပ်တန်းကစားသမားတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ထိပ်တိုက် တွေ့ခဲ့ရတဲ့သူပါ။
အွန်နရီ၊ ဖာဘရီဂတ်စ်၊ နာဆရီ၊ ဗန်ပါစီ၊ ဆန်းချက်ဇ်၊ အိုဇေးလ် တို့ဟာ သူနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီး အသင်းက ထွက်ခွါခဲ့ကြ၊ အသင်းမှာ ကစားခဲ့ကြတဲ့ ကစားသမားတွေအဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ်။ အာတီတာရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာလည်း ၃၂နှစ်သား အော်ဘာမီးယန်း ထွက်ခွါခဲ့တာတောင် ရလဒ်တွေ ပိုကောင်းအောင် ကစားပြနိုင်ခဲ့ပြီး ရာသီကုန်မှာ အဆင့်၄နဲ့ ၂မှတ်အကွာ၊ အဆင့် ၅နဲ့ ရာသီသိမ်းခဲ့လို့ မဆိုးလှဘူးလို့ပဲ သတ်မှတ်ရမှာပါ။ နောက်ရာသီတွေမှာလည်း စူပါစတားကစားသမားတွေနဲ့ အာတေတာ ထိပ်တိုက်တွေ့လာတဲ့အခါ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်သွားမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ကြရပါမယ်။
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ (25May)